डा. शिव सुबेदिको फेरी उस्तै मार्मिक गीत सार्वजनिक (भिडियो सहित)
बिछोडिएका दुई प्रेमिल जोडी लामो समयपछी भेट्दा अवस्था फरक अनी कहानी फरक । सोच्नुहोस् त माहोल कस्तो बन्थ्यो होला ? यस्तै प्रशङ्गलाई गीतमा उतारेका छन सर्जक डा. शिव सुबेदीले । गायक गायिका कुशल बेल्वासे र सुनितामी परियारको स्वर रहेको लोक दोहोरी गीत ‘अभागी त म हुँ’ युट्युवमा सार्वजनिक भएको छ ।
डा.शिव सुवेदीको शब्द तथा लय सिर्जना रहेको गीतको संगीत संयोजन बिनोद बाजुरालीले गरेका हुन भने रेकर्डिङ बिमल छिनाल, राजेन्द्र बाजुराली र समित परियारले गरेका हुन । स्टुडियो मालश्रीमा रेकर्ड गरिएको गीतको अडियो मास्टरिङ्ग भने खड्का बाजुरालीले गरेका हुन ।
आकर्षक भिडियो सहित सार्वजनिक गीतको भिडियोमा खेम सेञ्चुरी र जुना गुरुङको प्रेम काहानी देख्न सकिन्छ । भिडियोमा बाध्यताले मायालुसँग बिछोडिनु परेको भाव झल्किने दृश्यहरु समेटिएको छ । म्युजिक भिडियोलाई विनोद भण्डारीले निर्देशन गरेका हुन् भने करण चैशिरले छायांकन गरेको गीतको भिडियो सम्पादन मनोज कार्कीले गरेका हुन ।